सुन तस्करको झगडामा मारिए गगन तामाङ  OnlineKhabar
सुन तस्करको झगडामा मारिए गगन तामाङ
२६ असोज, काठमाडौं । नागार्जुन, ढुंगाखानीमा मृत भेटिएका रसुवा पार्वतीकुण्डका गगन लामाको सुन तस्करले हत्या गरेको खुलेको छ । प्रहरीका अनुसार लामा आफैं तस्करीमा संलग्न थिए । त्यसक्रममा ६ किलो सुन लुटिएको भन्दै भागेपछि उनको हत्या भएको हो ।
१४ असोजमा काठमाडौं नागार्जुन नगरपालिका वडा नम्बर ३ आदेश्वर ढुंगाखानीमा उनको शव भेटिएको थियो । प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले लाक्पा ग्याल्जेन, छिरिङ तामाङ, सबिना तामाङ, प्रकाश शाक्य र लाक्पा तामाङलाई पक्राउ गरेको छ ।
प्रहरीका अनुसार चिनियाँ नागरिक वाई र तेन्जिङले लाक्पा ग्याल्जेनको समूहलाई असार पहिलो साता १८ किलो अवैध सुन केरुङ हुँदै काठमाडौंसम्म ल्याउने जिम्मा दिएको थियो ।
तस्करीका क्रममा गगनले सुन लुटियो भन्दै १२ केजी मात्र बुझाए । ६ केजी सुन लिएर भागेपछि उनी लाक्पा ग्याल्जेनको समूहको तारो बने । फरार गगनलाई भेट्टाउन यो समूहले सबिना तामाङलाई प्रयोग गरे, जोसँग उनको नियमित कुराकानी हुन्थ्यो ।
सबिनाको आग्रहमा उनी बनस्थलीमा आए, जहाँ लाक्पा ग्याल्जेनको समूह उनलाई पर्खिरहेका थिए ।
यो समूहले चिहानडाँडामा लगेर गगनलाई चक्कु प्रहार गरेको खुलेको छ । घाइते अवस्थामै भागेका उनलाई आदेश्वर ढुंगाखानीमा पुर्‍याएर हत्या गरेको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ ।
२०७४ असोज २६ गते १९:११ मा प्रकाशित
नवजीवनको एक वर्षको आम्दानी १२ करोड
कैलाली भन्सारमा ६२ करोडको निर्यात, आयात करिब ८ अर्बको
सरकारविरुद्ध माइतीघरमा नेविसंघको प्रदर्शन
नयाँ शक्तिको प्रश्न : सरकार ! फोहार फाल्न रेल नै कुर्नुपर्ने हो ?
मधेस आन्दोलनका घाइतेको पीडा-घर धितोमा राखेर उपचार
संघीयता कार्यान्वयनमा अडचन, जिल्लाका सरकारी अड्डामा को बस्ने ?
संसद अगाडि धर्ना दिने कृष्ण पहाडीसहित अधिकारकर्मी पक्राउ
संसदीय समितिमा कांग्रेसले खोज्यो एक तिहाइ हिस्सा, नेकपा भन्छ : हुँदैन
सरकार नियतवश डा. केसीको जीवनमाथि खेलवाड गर्दैछ : देउवा
नोकिया एक्स फाइभ सार्वजनिक हुँदै, के–के छन् फिचर्स ?
ट्रम्प–पुटिनबीच भेटवार्ता, राष्ट्रपतीय चुनावमा हस्तक्षेप नगरेको प्रष्टोक्ति